Xuquuqda bani'aadamka | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Xuquuq iyo waajibaad / Xuquuqda bani'aadamka
Qaramada Midoobey sharaxaadeeda guud ee xuquuqda bani'aadamka waxaa ku qoran in dadka oo dhan dhasheen iyagoo ah xor oo leh qiimo iyo xuquuq isku mid ah. Xuquuqda bani'aadamku waa kuwa caalami ah, tani micnaheedu waa inay khuseeyaan dadka oo dhan.
Xuquuqda bani'aadamka waxa ku urursan qoraalo sharci oo kala duwan kuwaas oo lagu magacaabo qaraaryada. Waxaa jira sagaal qaraar aasaasi ah. Iswiidhan waxay waafaqday toddoba ka mid ah sagaalkan.
Tusaale dhanka xuquuqda bani'aadamka waxay noqon kartaa tusaale ahaan xaq loo leeyahay nolol, xaqa heer nololeed oo qofka ku filan, xaqa macluumaadka, xaqa dhaqanka ama xaqa in xor laga ahaado dhibaato dagaal ah.
Qaar ka mid ah kooxaha bulshada aad ayay u nugulyihiin oo sidaas darteed waxay leeyihiin ilaalin xuquuq oo dheeraad ah. Tusaale nooca kooxahan waa haweenka, caruurta, dadka leh hoos u dhac awooda laxaadka ah iyo dadka HBTQ (ragga jecel ragga kale, dadka labada jinsiba u galmooda, dadka taraanska ah iyo dadka leh cabbir iyo shakhsiyad ah labeebnimo).
Gudaha Iswiidhan waxaa mamnuuc ka ah in qof lagu takooro iyadoo ay sabab u tahay:
Iswiidhan waxay ka mid tahay Qaraarka Yurub kuna saabsan ilaalinta xuquuqda bani'aadamka iyo xoriyadaha aasaasiga ah. Qaraarkan tan iyo 1995 waa sharci Iswiidhish ah.
Haddii xuquuqdaada lagu xad-gudbay waxaad la xiriiri kartaa maxkamada Yurub ee xuquuqda bani'aadamka (Maxkamada Yurub) kuna taala Strasbourg.
Dheeraad ka akhri bogga intarnatka ee Maxkamada Yurub. Warbixintan waxaa lagu helayaa Ingiriisi iyo Faransiis.
Gudaha Iswiidhan waxaa waxaa xuquuqda bani'aadamka xitaa ilaaliya sharciyo aasaasi ah oo dhowr ah. Nidaamka dawlada waxaa ku jira tusaale ahaan buuga xuquuqda lehna xuquuqaheena xoriyada ee aasaasiga ah.
Halkan waxaa ku qoran in:
Xoriyadaha fikradaha (xoriyada hadalka, xoriyada macluumaadka, xoriyada diinta i.w.m.)
Ilaalinta jirka qofka iyo xoriyada dhaq-dhaqaaqa (mamnuucida xukunka dilka iyo jir-dilka i.w.m.)
Amaanka cadaalada (ka qaadista xoriyada iyo eegida maxkamadaha i.w.m.)
Ilaalinta hantida iyo xuquuqda tamashlaynta (xaqa in la joogo deegaanka dabiiciga ah i.w.m.)
Xuquuqda uu curiyuhu u leeyahay waxa uu soo saaray (xaqa lahaanshaha wax la abuuray)
Xoriyada ganacsiga (samantay ganacsi iyo xirfad)
Talaabooyinka suuqa shaqada (xaqa shaqo joojin, in shaqo bixiye ka xidho shaqaalaha goobta shaqada i.w.m.)
Waxbarasho iyo cilmi-baaris (xaqa waxbarasho aasaasi ah i.w.m.)
Akhri dheeraad ku saabsan oo hel xiriiryada xafiisyada ka hortaga takooridda Iswiidhan kuna qoran bogga intarnatka ee diskriminering.se.